शितल निवासमै महतोको पाखुरा समातेर पौडेलले भने- अझै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने?
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्र महतोको पाखुरा समातेर सोधे- अझै पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार डाकेको सर्वदलीय बैठक सकेपछि शितल निवासमै पौडेल र महतोबीच छोटो कुराकानी भएको थियो। उक्त भेटको संवाद पौडेलले आज बाँके पुगेर नेता/कार्यकर्तालाई सुनाएका छन्।
‘राष्ट्रपति भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा मैले राजेन्द्र महतोलाई पाखुरामा समातेर- ए राजेन्द्र, ओलीलाई अझै प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने भनेर सोधेँ,’ उक्त भेटबारे पौडेलले भने, ‘नयाँ जनादेश र अझै संसद विघटनका कुरा गर्नेलाई प्रधानमन्त्री पदमा बचाइराख्ने?’
पौडेलका कुरा सुनेपछि महतोले जवाफ दिए- केपीलाई प्रधानमन्त्री पदमा बचाइराख्या मैले हो र तपाईंहरूले हो। यसपछि पौडेलले भने, ‘मैले होइन।’ उसो भए तपाईंहरूको सभापतिले हो, महतोले भने।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भनेको तथा अदालतले प्रतिनिधि सभा ५ वर्ष विघटन गर्न नपाउने भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अझै विघटनको धम्की दिइरहेको पौडेलको भनाइ थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानविपरीत हुने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको भन्दै पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्नेबारे पौडेलसँग कुरा गरेका थिए।
‘ओली अहिले पनि जनादेश भन्छन् बा, अहिले पनि संसद विघटन गर्ने भन्छन्। यस्तो कहाँ पाइन्छ?,’ महतोसँगका कुराकानीबारे पौडेलले खुलाए, ‘अदालतको फैसलाले संसद ५ वर्ष विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ। यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई राखिरहने?’
प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चासो नदिएको महतोको प्रतिक्रिया रहेको पौडेल बताउँछन्।
हाम्रो सभापतिले राजेन्द्रजीसँग कुरा गर भन्नुभएको छ, म कुरा गर्छु भनेको छु,’ पौडेलले नयाँ समीकरण बनाउनेबारे महतोलाई भने।
महतोसँग भएका कुरा पौडेलले सभापति र उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जानकारी गराइसकेको बताए।
‘सरकार बनाउन कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक चासो राखेन भन्ने जसपाको भनाइ छ। पहल गर्नुपर्‍यो। तपाईंहरूले पहल गर्नुस् भनेर सभापति र उपसभापतिलाई भनेर आएको छु,’ पौडेलले नेता तथा कार्यकर्तामाझ भने।
नेता पौडेलले कांग्रेसको प्रमुख लडाइँ एमालेसँग भएको बताए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसँग धेरै जिल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने आँकलन गरेका पौडेलले भने, ‘प्रचण्डको पार्टी कुनै कुनै जिल्लामा होला। ओली नेतृत्वको एमालेसँग प्रतिस्पर्धा र प्रतिरोध गर्नुपर्छ।’
यसपछि पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले मनपरीतन्त्र चलाउन पाइनँ भनेर नयाँ जनादेशका कुरा गर्ने गरेको बताएका थिए। सर्वदलीय बैठकमै आफूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जनादेशबारे कुरा गर्दा प्रतिवाद गरेको पौडेल बताउँछन्।
‘हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नयाँ जनादेशको कुरा गर्नुभयो। मैले त्यहीँ सोधेँ- नयाँ जनादेश आएपछि अहिलेको जस्तो उपद्रो हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ?,’ उनले भने।
उनले आफूले सत्ताभन्दा पनि व्यवस्था महत्वपूर्ण भएको बताइरहेको पनि उनले बताए। ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि व्यवस्था अझै संकटमा छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि व्यवस्थामाथि संकट कायमै छ भन्ने उदाहरण शितल निवासमा देखिएको उनको भनाइ छ।
‘पुनर्स्थापना भए पनि व्यवस्थामाथि संकट छ, यसको उदाहरण शितल निवासमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशको कुरा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले समर्थन गर्ने। जनादेश भन्ने जनतालाई उल्लु बनाइरहने, मनपरी तन्त्र चलाउन पाइनँ भनेर नयाँ जनादेश भन्ने?’
२०७७ चैत्र ४, बुधबार १२:२४ 1 Minute 273 Views